IGunya lezoKhenketho laseMalta kuMntla Melika ngoku liphumelele iiMbasa ezi-3 eziGqwesileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMalta Breaking » IGunya lezoKhenketho laseMalta kuMntla Melika ngoku liphumelele iiMbasa ezi-3 eziGqwesileyo
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
(Ukusuka ku-L ukuya ku-R: uMichelle Buttigieg, uMmeli weGunya loKhenketho lwaseMalta, eNyakatho Melika kunye no-Maura Lee Byrne, uSr. I-Vice-President kunye nomshicileli, iQela lokuHamba leNkwenkwezi yaseNyakatho; Ikhredithi yesithombe: Vitaliy Piltser)
I-Malta Tourism Authority (MTA) yabizwa ngokuba yiBhodi yoKhenketho eNgcono eYurophu (igolide); Eyona ndawo yokufikela kwiMeditera (isilivere); kunye neNkqubo ye-Academy ye-Agent Academy (isilivere) kwi-2021 Travvy Awards, ebanjwe yi-TravAlliancemedia.
IiMbasa zeTravvy zowama-2021, ngoku zikunyaka wayo we-7, zikhawuleze zafumana udumo njengeeAcademy Awards zeshishini lokuhamba lase-USA.
Isiganeko sabanjwa ngoLwesithathu, ngoNovemba 10th, eMiami Beach, eFlorida.
IiTravvy zamkela abona bathengisi baphezulu, iindawo ekufikelwa kuzo, ababoneleli bobuchwephesha kunye nezinto ezinomtsalane, njengoko zikhethwe ngabo babazi kakhulu - iiarhente zokuhamba.
“Ukufumana ezintathu Amabhaso ohambo liwonga elikhulu kwiMalta, kwaye inentsingiselo ngakumbi emva kobhubhani, utshilo uMichelle Buttigieg, uMmeli we-MTA kuMntla Melika. Wongeze wathi, “Sifuna ukubulela ngakumbi iTravAlliance ngenkxaso yabo kunye nazo zonke iiarhente zokuhamba eziqhubekayo ezibonisa umdla omkhulu wokufunda nokuthengisa. Indawo yokufikela eMalta. Oku kuye kwenza iMalta yandisa kwaye yomeleza imizamo yayo yokuthengisa kunye nobudlelwane boluntu kwimarike yaseMelika. Ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthumela abathengi eMalta kuba ivuliwe kwakhona, ikhuselekile, inezinto ezininzi ezinokunikelwa, kunye nelifa elinomdla kakhulu eliza kuphononongwa kwaye lonwabele, iminyhadala kunye namava awohlukeneyo amnandi. ”
Ukusukela ukuba iGunya loKhenketho laseMalta (MTA) liphinde lavula ukuMela kwalo eMntla Melika ngo-2014, ukhenketho oluvela kwintengiso yase-US, i-pre covid, luphindwe kane.
UCarlo Micallef, uSekela-CEO kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso, uGunyaziwe wezoKhenketho waseMalta, wongeze wathi “I-MTA inombulelo kakhulu ukuba, kwakhona, ifumene amabhaso amathathu anqwenelekayo kurhwebo lwaseMelika olukhuphisanayo olubonisa ukuba iiarhente zokuhamba ziye zaxabisa kwaye zavuza ishishini leMalta Tourism Authority kwaye umsebenzi oqhubekayo nangexesha lobhubhane. Intengiso ye-MTA kunye nomsebenzi we-PR kuMntla Melika uqhubekile ungaphazanyiswa ngamanyathelo ahlukeneyo e-intanethi ancede abameli bohambo ukuba bazazi iZiqithi zaseMalta ngcono ngelixa igcina iMalta kunye neGozo phezu kwengqondo. Ezi mbasa zikwabonisa ukuzibophelela kwe-MTA kuqeqesho lweearhente zokuhamba kwaye sijonge phambili ngethemba lokwamkela abakhenkethi abaninzi baseMntla Melika kwiZiqithi zaseMaltese ngo-2022 nangaphaya.”
Iziqithi ezinelanga zaseMalta, embindini woLwandle lweMeditera, zilikhaya lolona xinzelelo lumangalisayo lwelifa lemveli elakhiweyo, kubandakanya neyona ndawo iphakamileyo ye-UNESCO yeNdawo zeLifa leMveli kulo naliphi na ilizwe. I-Valletta eyakhiwe yi-Knights enebhongo yaseSt. John yenye yeendawo ze-UNESCO kunye ne-European Capital yeNkcubeko ye-2018. I-patrimony yase-Malta kuluhlu lwamatye ukusuka kwi-architecture yamatye endala ekhululekile emhlabeni, ukuya kwelinye le-British Empire eyona nto inzima kakhulu. iinkqubo zokhuselo, kwaye ibandakanya umxube otyebileyo wezakhiwo zasekhaya, ezenkolo kunye nezomkhosi ukusuka kumaxesha amandulo, aphakathi kunye nasekuqaleni kwale mihla. Ngemozulu enelanga eliqaqambileyo, iilwandle ezinomtsalane, ubomi basebusuku obuchubekileyo kunye neminyaka eyi-7,000 yembali enika umdla, kuninzi okubonayo nokwenzayo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngeMalta, tyelela utyelelo.com.